Ukunikezwa Kwemfucuza Yezilwane
Fish ukudla isitshalo
Ukunikezwa kokudla okunophaphe
I-H5N1 i-Pathogenic avian influenza iqhamuke kakhulu e-Czech Republic
Isikhathi sokuthumela: May-17-2022
I-H5N1 i-Avian influenza ehlasela kakhulu e-Czech Republic NgokweNhlangano Yomhlaba Wonke Yezempilo Yezilwane (OIE), ngoMeyi 16, 2022, i-Czech National Veterinary Administration yabika ku-OIE ukuthi ukugqashuka komkhuhlane wezinyoni we-H5N1 oyingozi kakhulu kwenzeka e-Czech Republi. ...Funda kabanzi »
Ukuqubuka kwesifo saseNewcastle eColombia
Ukuqubuka kwesifo saseNewcastle e-Colombia Ngokwe-World Organization for Animal Health (OIE), ngoMeyi 1, 2022, uMnyango Wezolimo Nokuthuthukiswa Kwezindawo Zasemakhaya waseColombia wazisa i-OIE ukuthi ukuqubuka kwesifo saseNewcastle kwenzeka e-Colombia. Ukuqubuka kwalesi sifo kwenzeka emadolobheni aseMorales ...Funda kabanzi »
Ukugqashuka komkhuhlane wezinyoni oyingozi kakhulu eHokkaido, eJapane, kwaholela ekubulaweni kwezinyoni ezingu-520,000.
Isikhathi sokuthumela: Apr-30-2022
An outbreak of highly pathogenic avian influenza in Hokkaido, Japan, led to the culling of 520,000 birds More than 500,000 chickens and hundreds of emus have been culled in Two poultry farms in Hokkaido, Japan’s Agriculture, Forestry and Fisheries Ministry announced Thursday, Xinhua ...Funda kabanzi »
Ukuqubuka komkhuhlane wezinyoni we-H5N1 oyingozi kakhulu wenzeke e-Hungary
Isikhathi sokuthumela: Apr-16-2022
Ukuqubuka komkhuhlane wezinyoni we-H5N1 oyingozi kakhulu wenzeke e-Hungary Ngokusho kwe-World Organisation for Animal Health (OIE), ngo-Ephreli 14, 2022, Umnyango Wezokuphepha Kokudla woMnyango Wezolimo waseHungary utshele i-OIE, Ukuqubuka kwezinyoni ze-H5N1 eziyingozi kakhulu. inf...Funda kabanzi »
Isifinyezo sokuqubuka kwe-African Swine fever ngoNdasa wezi-2022 kwabikwa izehlakalo eziyishumi ze-African swine fever (ASF) eHungary ngomhlaka 1 Mashi Ayisikhombisa ...Funda kabanzi »
Avian influenza ubhubhane ukufa kwezilwane kufanele high-lokushisa inzalo ukwelashwa okuvaliwe
Isikhathi sokuthumela: Apr-01-2022
Umnyango wezoLimo eNebraska umemezele icala lesine lombuso lomkhuhlane wezinyoni ngemuva kwepulazi eliseHolt County. Izintatheli zaseNandu zithole ngoMnyango wezoLimo, i-United States isanda kuqubuka izifunda ezingu-18 ezinemikhuhlane yezinyoni. I-Nebras...Funda kabanzi »
Ukuqubuka komkhuhlane wezinyoni ePhilippines kubulale izinyoni ezingu-3,000
Avian flu outbreak in Philippines kills 3,000 birds According to the World Organization for Animal Health (OIE), on March 23, 2022, the Philippine Department of Agriculture notified OIE that an outbreak of H5N8 highly pathogenic avian influenza occurred in the Philippines. The outbr...Funda kabanzi »
Cishe zingu-12,000 izingulube ezibulewe ngenxa yokuqubuka komkhuhlane wezingulube epulazini lezingulube eJapan
Ngokwemibiko egcwele yabezindaba yaseJapan, ngomhlaka-12, eMiyagi Prefecture, eJapan yathi bekunobhubhane lwe-swine fever epulazini lezingulube esifundeni. Njengamanje, ingqikithi yezingulube ezingaba ngu-11,900 epulazini lezingulube sezibulewe. Mhla ziyi-12, iMiyagi Pre...Funda kabanzi »
Ukuqubuka komkhuhlane wezinyoni zaseFrance kuyaqhubeka nokudanga umonakalo, ngaphezu kwezigidi ezi-4 zezinkukhu ezibulewe
Isikhathi sokuthumela: Mar-12-2022
Izinyoni ezingaphezu kwezigidi ezine sezibulewe kusukela kwaqubuka umkhuhlane wezinyoni eFrance kulobu busika Ukuqubuka komkhuhlane wezinyoni eFrance kulobu busika sekusongela ukufuywa kwezinkukhu ezinyangeni ezedlule, ngokusho kwe-Agence France-Presse.UMnyango Wezolimo waseFrance umemezele esitatimendeni. ukuthi...Funda kabanzi »
Zibalelwa ku-27,000 izinyoni ezibulewe ekuqubukeni komkhuhlane wezinyoni eNdiya
Zibalelwa ku-27,000 izinyoni ezibulewe ekubhedukeni komkhuhlane wezinyoni eNdiya NgokweNhlangano Yomhlaba Wonke Yezempilo Yezilwane (OIE), ngomhla zingama-25 kuNhlolanja wezi-2022, uMnyango Wezokudoba, Imfuyo kanye Nezobisi wase-India wazisa i-OIE ngokuqubuka komkhuhlane wezinyoni i-H5N1 oyingozi kakhulu e-India. I-India. ...Funda kabanzi »
Zingaphezu kuka-130,000 izinkukhu ezizalelayo ezibulewe ngokuqubuka komkhuhlane wezinyoni epulazini lokuzalanisa eSpain.
Zingaphezu kuka-130,000 izinkukhu ezizalelayo ezibulewe njengoba kuqubuke udlame epulazini esifundazweni saseBaladolid enyakatho-ntshonalanga yeSpain. Ukubheduka komkhuhlane wezinyoni kuqale ekuqaleni kwaleli sonto, lapho ipulazi libona ukwanda okukhulu kwezinga lokufa kwezinkukhu. Bese kuba umkhakha wezolimo, ukudoba...Funda kabanzi »
I-Uruguay imemezela isimo esiphuthumayo sezinkukhu kazwelonke
Ngokusho kwe-Uruguay's "National News" kubika ngoJanuwari 18, ngenxa yegagasi lokushisa lakamuva elihlasele e-Uruguay, okubangele ukufa kwezinkukhu eziningi, uMnyango Wezokufuywa Kwezilwane, EzoLimo Nezokudoba umemezele ngoJanuwari 17 ukuthi izwe selidlulile. .Funda kabanzi »
Shandong Sensitar Imishini Ukukhiqiza Co., Ltd
Ifeksi: + 86-536-6053915
I-H5N1 yomkhuhlane wezinyoni oyingozi kakhulu...
I-H5N1 ukuqubuka komkhuhlane wezinyoni oyingozi kakhulu e-Czech Republic Ngokusho kwe-World Organization for Animal Health (OIE), ngoMeyi 16, 2022, i-Czech National Veterinary Administration yabika ku-OIE ukuthi ...